Torohevitra vitsivity ho fitsaboana ny aretim-bavony – jEreo Ato
Torohevitra vitsivity ho fitsaboana ny aretim-bavony
Publié le 20 mai 2019 24 mai 2019 - 2 minutes de lecture Catégories SantéÉtiquettes fanafody vavony
Misy karazany maro no mety mahatonga ny aretim-bavony. Ireto ary misy torohevitra telo (3) afaka handramana raha tratran’ny aretim-bavony ianao. Koa manasa anao ary hamaky azy etsy ambany raha mahaliana anao izany.
1 -Torohevitra voalohany
Maka ianao « tamotamo » dia sasana madio tsara. Avy eo dia voasana tsara ilay izy dia kikisana. Vita izay dia afaka mihinana iray sotro avy hatrany amin’izy henonao maharary iny ilay vavony. Raha ny amin’ny tsirony aloha dia ratsiratsy ihany fa mila miaritra kely raha te ho salama.
2- Torohevitra faharoa
Ahitana raketa betsaka eto Madagasikara
Ny torohevitra manaraka indray dia maka ianao « raketa ». Izy io moa dia ilay zava-maniry misy tsilo ny raviny sy misy voany menamena mipetaka eo amin’ny sisin’izany raviny izany. Any amin’ny toerana Atsimon’ny Nosy no tena ahitana azy ity na eny Ambanivohitra eny.
Alaina ary ilay raviny mipelatra misy tsilotsilony iny dia rasaina amin’ny antsy hizara roa. Avy eo dia kaofina amin’ny sotro tao ilay ranony maditidity dia hanina tsy asiana fangarony. Laniana tanteraka ny ranony azo avy amin’ilay silany izay nosilahana tamin’ny antsy iny. Raha ny tsirony no lazaina dia ratsiratsy matsatso ary mitovitovy amin’ny tapotsin’atody ny paozin’ny ranony. Ity torohevitra ity indray dia afaka atao amin’izay fotoana mampazoto anao.
3- Torohevitra fahatelo
Anisan’ny mampijanona ny aretim-bavony ny ranon’ovy manta
Eto indray dia maka ianao ovy (pomme de terre) efatra na telo dia voasana. Diovina tsara izy ireo ary kikisana na potehina amin’ny “mixeur”. Avy eo dia lomana rano ao anaty vilia ireo ovy voapotika mandritra ny telopolo minitra eo ho eo. Rehefa avy eo dia alaina ilay zavatra miraikitra madity miraikitra amin’ny vilia eo dia sotroina amin’ny maraina mbola tsy nisakafo. Raha ny tsiron’izy ity indray dia ratsiratsy sarotra atelina.
Araho ary ireo torohevitra ireo raha toa ka marary vavony ianao fa manasitrana anao haingana ireo. Mirary soa indrindra !
Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et d’autres font que ça arrive.
Les membres du Sénat seront réduits à 18 et son budget révisé à la baisse